What is Budget & Importance of Budget — Balance Professional Services
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ Budget ကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲ
ကိုယ့်လုပ်ငန်း ဘတ်ဂျက်/Budget ကိုဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲကြမလဲ?
Budget Planning ဆိုတာ အရှင်းဆုံးပြောရရင် ငွေကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ၊ ဘယ်လိုထိန်းမလဲကို စီမံတာပါပဲ? စာနဲ့ပေနဲ့ ရှုပ်အောင်ပြောရရင် Budget ဆိုတာ လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးစီမံမှုအပိုင်း နဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုပြည့်မီအောင် ငွေကိုဘယ်လောက်(ဘယ်လို)သုံးစွဲပြီး အကောင်အထည်ဖော်ရမလဲ ဆိုတာကို ရေးဆွဲတဲ့ Plan တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Budget Planning ထဲမှာ လုပ်ငန်းရဲ့ ငွေ၊ လူအင်အား နဲ့ အခြား ပိုင်ဆိုင်မှု (မြေ၊ ကား စသည့်) အရင်းအမြစ်များကို သူ့နေရာနှင့်သူ ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ (Resource Allocation)၊ ဘယ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ငွေဘယ်လောက်သုံးမလဲ၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ လစဉ် ငွေဝင်အား(အရှုံးအမြတ်) ဘယ်လောက်ရှိမလဲ၊ ကိုယ့် Business Plan ကို ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်မလဲစတဲ့ အချက်တွေကို စဉ်းစားရေးဆွဲရပါတယ်။ လုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာ Budget ကို Business Plan ထဲမှာ မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်း ရေးဆွဲရပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ၃လ တစ်ခါ (ဒါမှမဟုတ်) ၁နှစ် တစ်ခါ Budget ကို ပြန်စီစစ်ရတယ်/ ပြန်ဆွဲရပါတယ်။ လုပ်ငန်းဟာ ကိုယ် Budget ဆွဲသလောက်ကော အလုပ်ဖြစ်ရဲ့လား? ဘာတွေ အတွက်မှားသွားသလဲ? နောက်တစ်ခါ ဘာတွေထပ်ပြင်ဆင်ရမလဲ? အရင်လတွေ၊ နှစ်တွေက Budget ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး နောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Budget ရဲ့အလားအလာကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။
Budget Plan ရဲ့ အခြေခံကတော့ လုပ်ငန်းရဲ့ ပုံသေကုန်ကျစရိတ်များ (Fixed Cost) နဲ့ ပြောင်းလဲနိုင်သော တသက်မှတ်တည်းမဟုတ်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များ (Variable Cost) ကို လစဉ်မှတ်တမ်းတင်ပြီး ငွေတွေကို လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဘယ်နေရာမှာ အကောင်းဆုံးအသုံးချမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို့ Budget Plan တစ်ခုရှိသင့်တာလဲ?
မရှိတော့ရော ဘာဖြစ်မလဲ? မရှိတော့
• မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမိမယ်၊
• ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ ငွေတကယ်လိုအပ်ချိန်မှာ ငွေပြတ်လပ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ထိရောက်တဲ့ Accounting System တစ်ခုကနေ Financial Statements လို့ခေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရှုံးအမြတ်စာရင်း/ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု အစီရင်ခံစာ/လက်ကျန်ရှင်းတမ်း စတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာမျိုးစုံ ထွက်ပါတယ်။ ဒီလို ထွက်လာတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေကို လေ့လာစမ်းစစ်ပြီးမှသာ အနာဂတ်အတွက် Budget Planning လုပ်ရာမှာ တိကျမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ Budget Planning လုပ်တဲ့အခါ လုပ်ငန်းရဲ့ ရေတို/ရေရှည် နှစ်ခုလုံးအတွက် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရပါတယ်။ ရေတို Budget မှာ တစ်လ တစ်လ ဝန်ထမ်းခ၊ အိမ်/မြေ ငှားရမ်းခ၊ Suppliers တွေကို ပေးချေခ စသဖြင့် ဖြစ်ပြီး၊ ရေရှည် Budget ဆိုတာကြတော့ လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ စရိတ်၊ စက်ပစ္စည်း ကြီးကြီးမားမား ဝယ်ယူဖို့စရိတ် စသဖြင့် ကြိုတွက်ပြီးပြင်ဆင်ရတာတွေပါမယ်။
ဘဏ်ချေးငွေတွေ၊ SME Loan တွေလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာလည်း Budget ကိုမပါမဖြစ်ထည့်သွင်းပေးရပါတယ်။
စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ Budget မှာထည့်သွင်းစဥ်းစားရတဲ့ Fixed Cost နဲ့ Variable Cost
လုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာ Fixed Cost/ လစဉ် နှစ်စဉ်ပုံသေကုန်ကျစရိတ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ ဥပမာ။ စက်ပစ္စည်းငှားရမ်းခတွေ၊ ဝန်ထမ်းလစာတွေ၊ အာမခံစရိတ်တွေ၊ ကား ဆိုင်ကယ် ငှားရမ်းခတွေ (ဒါမှမဟုတ်) အရစ်ကျနဲ့ အကြွေးဝယ်တာတွေ၊ အိမ်ငှားခ၊ ရုံးခန်းငှားခတွေ စတဲ့ အများအားဖြင့် ပုံသေဖြစ်နေတဲ့ စရိတ်တွေပါတယ်။ (ကုန်စျေးနှုန်းထိုးတက်သွားလို့ ငှားခတွေ စျေးတက်သွားတာတော့မတတ်နိုင်)
နောက်တစ်ခု Variable Costs/ ပြောင်းလဲနိုင်သောကုန်ကျစရိတ်တွေဆိုတာကတော့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှုန်းပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များကို ခေါ်တာပါ။ ဥပမာ။ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခတွေ (Shipping Costs)၊ ကြော်ငြာအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေ၊ စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်တွေ၊ မီတာခတွေ၊ လောင်စာဆီဖိုးတွေ စတဲ့ စျေးနှုန်းဟာ ကိုယ့်အသုံးပြုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနေတဲ့ စရိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုကို တည်ထောင်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ Startup Cost (လုပ်ငန်းတည်ထောင်ရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်) နဲ့ Operating Cost (လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ) ဘယ်လောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို Budget Planning လုပ်ရပါမယ်။
ဒါဆို Budget ကို ဘယ်လို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ကြမလဲ?
Budget တွက်ချက်ရာမှာ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး တိတိကျကျတွက်ချက်နိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကိုယ်ကခုမှလုပ်ငန်းစတာဖြစ်တဲ့အတွက် အရင်နှစ်ကအသုံးစရိတ်တွေ၊ ဝင်ငွေတွေ၊ ငွေလည်ပတ်မှုတွေကို ကြည့်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆို အသုံးစရိတ်၊ ကုန်ကျစရိတ်များကို ၅% ကနေ ၁၀% လောက်ထိ အပိုထည့်သွင်းထားရပြီး ဝင်လာနိုင်တဲ့ဝင်ငွေကိုတော့ လျှော့ပြီး တွက်ချက်ထားရပါမယ်။ တစ်ခုခုဆိုရင် ကာမိအောင်လို့ပါ။ တကယ်တမ်းတော့ ဝင်ငွေကိုခန့်မှန်းတာထက် ကုန်ကျစရိတ်တွေကို တွက်ချက်ခန့်မှန်းရတာပိုလွယ်ပါတယ်။
Budget ခန့်မှန်းထားတဲ့နှစ် တစ်နှစ် တဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်နဲ့ တကယ့်ကိန်းဂဏန်းနဲ့ တိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ မှန်ကန်လည်းဆိုတာ သိရတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့်မှတ်ထားရမှာတစ်ခုက တစ်ခါတစ်ရံမှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာတာနဲ့ ခန့်မှန်းထားတာတွေနဲ့က မထင်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် မတူတာတွေ လွဲနေတာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
• အဓိက ဝယ်လက်တစ်ယောက်ရရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆုံးရှုံးခြင်း
• ဈေးကြီးသောစက်ပစ္စည်းတစ်ခု ဝယ်လိုက်ရခြင်း
• အိမ်ငှားခ၊ ရုံးငှားခမြင့်တက်လာခြင်း
• ဝန်ထမ်းအသစ်များ ခန့်ထားခြင်း
• ဥပဒေအပြောင်းအလဲ နဲ့ အခွန်များတိုးမြင့်လာခြင်း စတဲ့ကြိုတွက်ထားလို့မရတဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကဲဒီတော့ Budget အကြောင်းနဲ့ အရေးကြီးပုံကို တီးမိခေါက်မိကြရောပေါ့။ ထပ်ပြီးတော့ Budget Plan ရေးနည်းတွေကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါဦးမယ်။
ထက်ခိုင် (Business Development)၊ ရဲရင့် (Client Success)